XOG+: Cabdiweli Gaas markale ma u tartamayaa M/weyne-nimada Puntland? – Puntlandtimes
XOG+: Cabdiweli Gaas markale ma u tartamayaa M/weyne-nimada Puntland?
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland ee hadda waqtigu ka dhamaanayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaan wali shaacin in uu yahay musharaxa u taagan qabashada xilkaas markale iyo in uu ka haray tartanka doorashada, xili ay ka hartay mudada doorashada wax ka yar 50 maalmood.
Dadka la socda siyaasadda doorashada Puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay mustaqbalka siyaasadeed ee Cabdiweli Gaas, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in ay suuragal tahay in uu ka haro tartanka doorashada.
Xog kale ayaa sheegaysa in uu Madaxweyne Gaas dhamaadka bisha December ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa, ka dib marka uu magacaabo guddiga Xalinta Khilaafaadka iyo Ansixinta baarlamaanka cusub.
Madaxweynaha Puntland ayaa ciyaaraya talaabooyin adag oo siyaasadeed, waxaana kamid ah in uusan ilaa hadda jaan goynin mustaqbalkiisa siyaasaded ee kuwajahan doorashada dhaw, uusana soo bandhigin.
Xubnaha aad ugu dhaw Cabdiweli Gaas ayaa u sheegay warbaahinta Puntlandtimes.com in uu Madaxweyne Gaas is sharaxi doono dhamaadka bisha soo socota, isla markaasna ay saaxiibo badan oo katirsanaa baarlamaankii hore iyo kuwa cusub oo taageersan ay soo galayaan baarlamaanka cusub.
Siyaasadda uu dagay Gaas ee kuwajahan doorashada dhaw, ayaa ah mid ay is weydiinayaan shacabka Puntland, iyadoo waqtigan oo kale musharaxiinta oo dhan ay yihiin kuwa la wada og yahay, marka laga reebo dad wali xilal dawladeed haya oo is qarinaya.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa la doortay 8 January 2014, isagoo hadda ku dhaw gabagabada shanti sanno ee loo doortay madaxweyne-nimada Puntland, waxaana lafilayaa in uu doorashada Madaxtinimada qabto waqtigeedii sida uu balan qaaday dhawaan.
Ama is sharax ama ha is sharaxin weligii guulaysan maayo habaarkii dadka masaakiinta ah ee PUNTLAND baa ku dhacday.
Wuxuu qaban waayay 5 sano miyuu qabanayaa hada..
Xataa haduu guulaysto cidna ka aqbali mayso, nin dagaalna maaha oo Tukaraq, Gaalkacyo iyo dagaalkii Jiriiban baa Gaas lagu ogaaday.
A.GAAS waxuu noqon kha’in qaran hadii uu ka haro doorashada. Reer puntland waxay wakhtigaan xasaasiga ah ee lagu jiro u baahan yihiin shaqsi ay hubaan oo mugdi uga jirin meesha uu mustaqbalka u hogaamin puntland. Geeska africa isbadalo iyo is bahaysi xoogan ayaa ka jira wakhtigaan. Puntland waxaa loo arkaa darbi hortaagan isbadaladaan iyo isbahaysigaan xaaraanta ah ee geeska africa dulhoganaya. Doorashadaan hada puntland ka dhin , la mid ma aha kuwii hore oo kale. Waxay puntland ula mid tahay “JIR AMA JIRITAANKAAGA JABI’.